Global Voices teny Malagasy » Tantaran’ny mpampianatra iray ao Gaziantep, tanànan’ireo Siriana mpitsoa-ponenana ao Tiorkia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Aogositra 2019 2:49 GMT 1	 · Mpanoratra Nicoletta de Vita Nandika (fr) i Emmanuelle Marmion, Sylvia Aimée
Sokajy: Syria, Tiorkia, Ady & Fifandirana, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Vonjy Voina, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
80 kilaometatra miala amin'ireo ady, 100 kilaometatra miala an'i Kobane (ilay tanàna Kiorda voababo, avy eo afaka tamin'ny ziogan'ny fanjakana Islamika) ary 60 kilaometatra miala ny sisintany siriana, Gaziantep  [teny frantsay] no tanàna Eoropeana farany alohan'ny hidirana ny Afovoany-Atsinananat. Ity renivohitra Tiorka ity, miorina somary any atsimo, dia fivondronan'ireo finoana, ireo fomban-drazana, ny maoderina ary ireo fifanoherana, eo anelanelan'ny Afovoany-Atsinanan sy Eoropa.
Sary an'ny mpanoratra, Nicoletta de Vita
Ny fiainan'i Gaziantep dia arindran'ireo vavaka dimy isanandro alefa avy amin'ireo fanamafisam-peo, napetraka isaky ny zoron-tanàna. Mifangaro ao afovoan-tanàna ara-tantara ireo rafitrano maoderina sy ny trano fivavahana tranainy, izay ahitana an'ireo ivontoeram-pivarotana anatina tsenabe iray natao ho an'ireo laron-tsakafo. Fiarakodia iray amin'ny telo no ahitana marika siriana: ny 500 000 amin'ireo, izay an'ny vahoaka voaratran'ireo daroka baomba sy ny fandrosoan'ny Daech, no any an-tanàndehibe. Tsy tahaka an'ireo izay miaina manakaiky ny sisintany, matory any anatin'ireo toby ho an'ny mpitsoa-ponenana na ireo tranobe ipetrahana tsy ara-dalàna, ireo Siriana ao Gaziantep. Tsy mitabataba na mampiaka-peo mihitsy ireto farany ireto, raha ireo Tiorka etsy andaniny kosa saika tsy miresaka mihitsy ny amin'ireo “siriana mpitsoa-ponenana”.
Fa misy ampahany kely amin'ny vahoaka miasa amina ONG iray, ny GEGD (Gaziantep Eğitim ve Gençlik Dernegi)  [teny tiorka] no mandray an-tànana, manabe ary mitaiza ireo ankizy manana fiaviana siriàna sy afgàna. Nitsidika io ivontoerana io aho, noho ny fiofanana iray nokarakaraina fikambanana tiorka iray miahy ny fampiatiana ara-kolontsaina ao Gaziantep, niarahana niasa tamin'ny Fiombonambe Eoropeàna. Mitovitovy amin'ny trano heva ny birao foiben'ilay fikambanana, misy zaridaina sy kilalao sangodina vitsivitsy, saingy dia ivontoerana iray io, ahitàna olona manana zompirenena folo raha kely indrindra sy kolontsaina isankarazany miaraka miaina, mifampiresaka ary miaraka mianatra.
Irene Itria miaraka amin'ireo hafa mpirotsaka an-tsitrapo avy ao amin'ilay ivontoerana. Sary an'ny mpanoratra, Nicoletta de Vita
Raha vao misy feo italiana heno, dia tsapa avy hatrany ny fientanampo, satria sarotra be ny hahita mpizahatany italiàna, na indrindra indrindra fa hoe mpiasa an-tsitrapo avy amin'ny Sampanasa Eoropeàna. “Sady miasa ho toy ny sekoly ihany koa ny ivontoeranay, izaho manokana dia mampianatra ny teny arabo sy anglisy an'ireo ankizy teratany siriàna sy afgàna”. Nanohina ahy manokana tampoka mihitsy ny tenin'i Irène, ary ny tsikiny dia mandika tanteraka ny firotsahany sy ny fitiavana atontony ao anatin'ny asany.
“Italiàna aho ary zara raha mahay teny tiorka, ireo ankizy tsy miteny afa-tsy siriàna sy afgàna, avy eo aho mampianatra azy ireo ny teny arabo sy anglisy nefa tsy misy teny iraisana akory izay tena fanamby iray manosika raha ny marina. Omeko azy ireo ny fitaovana ahafahany mianatra saingy ireo tsiky sy ny fihetsik'izy ireo no mandrindra ny andavanandroko. Noana kolontsaina ry zareo, noana fahalalàna saingy ny tena irin-dry zareo indrindra dia ny fanekena na faharahakeliny ny tsy hanaovan'ny vahoaka tiorka maso be tsy mahita azy ireo” hoy i Irène tamiko. Avy eo notohizany: “Raha toa ianao miresaka ny olana siriàna na ny teny hoe mpitsoaponenana aminà teratany tiorka iray, ny sorony no akariny dia lasa izy miala. Ny marina, na dia mahay mandray olona aza izy ireo manoloana ireo kolontsaina isankarazany miaraka miaina am-pilaminana eto, tsy misy akory ivakian-dry zareo loha amin'izay toby fandraisana sy izay zaza matin'ny hanoanana miala roa metatra fotsiny amin'ny misy azy ireo, Mazava loatra, tsy ny olona rehetra eto Gaziantep no misaina tahaka izany, saingy marobe ireo tsy mahafantatra akory io tena toedraharaha misy io”
Tanatin'ireo olona marobe nihaonako nandritra io diako io, i Irène irery no hany nahavita nanome valinteny tamin'ireo fanontaniako sy nitantara tamiko ny fomba famelomantena am-pahamendrehana ataon'ireo Siriàna.
Mahita izay ivelomany ry zareo, indrindra fa avy amin'ireo fako, amin'ny fanasarahana ireo akora isankarazany hita any anatin'ireo dabam-pako mba ho amidy rehefa avy eo. Ireo izay tavela ao Gaziantep sy tsy afaka ny hifindra any aminà tanàna tiorka hafa na firenena eoropeàna hafa, dia mikatsaka ny handefa ny zanany any am-pianarana, ary raha tsy vitany izany dia mangataka fanampiana ao amin'ilay ivontoerana ara-kolontsaina,
Ny ankohonan'ireo olona fantatro, na eo aza ny fahasarotana ara-toekarena sy ny trano fonenana tena manahirana, dia tsy miditra mihitsy amin'ny fampiasàna herisetra na ny fanaovana heloka mba hivelomana. Lazain-dry zareo fa ny tranony, ireo hopitaly, ny tanàna manontolo dia mety ho voadaroka baomba avokoa, saingy tsy izany rehetra izany no hanova azy ireo ho fatritran'olona, tsy ho potika tahaka ireo tranoben-dry zareo akory ny fahamendrehany”
“Mahazatra an-dry zareo Tiorka ny mandray olona sy mandefitra ny fisian'ireo kolontsaina hafa, satria izy ireo no tetezana mampifandray an'i Eoropa sy Azia, kanefa, nivandravandra be ny fihenjanana misy eo amin'ireo teratany siriàna sy ireo mpiasa tao an-tobin'ny mpitsoaponenana. Vao tonga kelikely monja aho dia efa nahamarika fa ny telefaonan'ireo rehetra mpirotsaka an-tsitrapo dia tsy nisy afaka niantsoana na nandraisana antso intsony, azo ambara ho samy voabahana daholo izy rehetra”, hoy izy mantsy ahy
Tampoka teo, nanomboka nampidina ny feony i Iréne, no sady nanomboka nisoroka ny fanononana ny teny hoe Siria na Siriàna. Satria, ho amin'izany, dia tsy maintsy ekena ny olan'ireo mpialokaloka. “Sarotra ny teodraharaha any amin'ny sisintany, ary noho ny antony marobe, tsy nahita vahaolana ny governemanta tiorka. Arakaraky ny maha-maharitra ilay toedraharaha no mahatonga azy hiharatsy ihany koa”.
Arakaraky ny isisihan'ireo fanontaniana napetrako, nihatonga ihany koa ny fiafaran'ny sekoly ary efa niomana ny hivoaka ireo ankizy. Endrika sariaka, kahie sy boky eny an-tanan-dry zareo, antony maro manosika azy hisaotra am-pitiavana an-dramatoa Irène mpampianatra. Ary raha nanasa azy ireo aho mba hiaraka haka sary tamiko, ny feon-dry zareo no nandrakotra ahy tamin'ity fanontaniana ity hoe : “Where are you from (avy aiza ianao ?) ? Where are you from ?”
Ireo ankizy avy ao amin'ny sekolin'i Irène. Sary an'ny mpanoratra, Nicoletta de Vita
Mitsiky amiko i Irène, afapo amin'ny asany tontosaina eo ankilan'ireo ankizy.
Amin'ny andro sasantsasany, tahaka ny mbola manako ao an-tsaiko ao ireo feo ireo. “Avy aiza ianao? Avy aiza ianao?”
Ankehitriny, tena mahatsiaro ny tenako ho ao Gaziantep tokoa aho.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/05/140948/